Uri Kuwana Zano Rakaipa Kubva Kune Vanotungamira Vatengesi? | Martech Zone
Uri Kuwana Zano Rakaipa Kubva Kune Vanotungamira Vashambadzi?
Pamwe ndanga ndiri mumutambo wekushambadzira kwenguva refu. Zvinotaridza kuti nguva yakawanda yandinoshandisa muindasitiri ino, vanhu vashoma vandinoremekedza kana kuteerera. Izvi hazvireve kuti handina vanhu avo vandinoremekedza, zvinongova zvekuti ndiri kunyadziswa nevazhinji vanobata tarisiro.
Chenjerai vaporofita venhema, vanouya kwamuri vakapfeka matehwe emakwai, asi mukati mapere anoparadza. Mat. 7: 15
Pane zvikonzero zvishoma…
Kutaura Kukuru uye Kushambadzira Kwakakura Kunowirirana Matarenda Ega
Ini ndinoda kutaura pamberi pevanhu uye ini ndinoedza kubuda kaviri pamwedzi kuti nditaure. Ndinobhadharisa mari yekutaura yekuvhara nguva yangu ndisiri pabasa, asi hapana chinosekesa. Kwemakore, ini ndaisa yakawanda nguva mune iyo hunyanzvi uye chaizvo kuyedza kurova kunze kwepaki nguva dzese dzandinosvika pamberi pevanhu.
Sezvineiwo zvakakwana, nepo ini ndichizvitengesa kuti ndiwane mikana yekutaura paruzhinji, hunyanzvi hwangu hwekutaura hahune chekuita nehunyanzvi hwangu hwekutengesa. Kuva mukurukuri weveruzhinji hakuite iwe mushambadzi mukuru. Kuva mushambadzi mukuru hakuite iwe mukurukuri weveruzhinji (kunyange zvichikupa mikana yakawanda yekutaura).
Nehurombo, ini ndanga ndiine vatengi vakati wandei vakashandira mukuru vakurukuri kubatsira nekutengesa kwavo - zvino vakaodzwa mwoyo zvikuru nezvakawanikwa. Sei? Zvakanaka, nekuti mutauri weveruzhinji arikutengesa kutaura kwavo, vachifamba nyika yese (kana pasi), uye zvese zvavari kuita ndezve chinangwa chekuwana dzimwe hurukuro. Hurukuro ndidzo dzinobhadhara zvikwereti zvavo, kwete kushambadzira kwevatengi.
Hurukuro ndidzo dzinobhadhara zvikwereti zvavo, kwete kushambadzira kwevatengi. Kusanganisira yambiro dzinovhundutsa, sirivheri bara inowana, kana kushandisa dzidziso dzisina kuyedzwa dzinotengesa inotevera yekutaura mukana - asi inogona kutyaira kushambadzira kwako muvhu.
Kunyora Nezve Kushambadzira Hazvireve Kuti Uri WeMarketer
Ini handigoni kumirira kutyora rinotevera rekushambadzira bhuku rinobuda. Nguva yakadzikama inoshandiswa nebhuku rakakura rekushambadzira inowedzera kufunga kwangu uye maitiro ekufunga. Ini ndinowanzozviwana ndave kutsaukira mukati mevatengi mazano uye dzimwe pfungwa ndichiverenga, ndichirova kumashure kuti ndione zvandakarasikirwa uye ndichinyora manotsi paden padhuze nechigaro changu chekuverenga.
Izvo zvakati, bhuku rekushambadzira rinowanzo kuve humbowo hweasvomhu hunopihwa nemunyori ku… zvakanaka… tengesa mabhuku. Chokwadi, uchiti uri munyori unovhura mikova yekushambadzira, kubvunza, uye nemikana yekutaura. Uye, semunyori pachangu, ndinogona kukuvimbisa kuti kuve mushambadzi mukuru kunobatsira zvachose mukutengesa mabhuku. Nekudaro, ichiri chekutengesa mabhuku uye kwete hazvo kuita kushambadzira kukuru.
Kune akawanda anosara, hongu! Vatengesi vazhinji vanofarira kunyora uye kugovana zvavakawana kuburikidza nemabhuku.
Vanotungamira Vashambadziri Vanogona Kusatarisira Makambani Akaita Ako
Ndakave nevatengi vasinganzwisisike mumakore apfuura kusanganisira Salesforce, GoDaddy, Webtrends, Chase, uye - nguva pfupi yadarika - Dell. Ini ndinogona kunyatso kukuvimbisa iwe kuti matambudziko anowanikwa nemasangano makuru aya akasiyana nemabhizimusi madiki nepakati atinoshanda nawo. Nepo kambani hombe inogona kutora mwedzi kusvika
Bhizimusi hombe rinogona kutora mwedzi kuona izwi nenzwi rematanho, kuronga zviwanikwa zvemukati, uye kufamba nenzira dzepamutemo kana imwe nzira yekutendera. Dai tikashanda pakumhanya uye nekukurumidza nekutanga kwedu, vangadai vasina bhizinesi. Akawandisa emakambani atakashanda nawo akarasa bhajeti hombe kune vatungamiriri munzvimbo medu kuti vanyadziswe mumhedzisiro.
Maitiro Ekuwana Akakodzera Maki Iwe Unogona Kuvimba
Ini handisi, munzira ipi neipi, kunongedzera kune vatauri, vanyori, uye vanotungamira vashambadzi uye ndichiti havapi vateereri vavo, vaverengi, kana vatengi chero kukosha. Ndine chokwadi chekuti vanoita… ndezvekuti varege kupa iwe kukosha. Mabhizinesi haana kufanana uye mumwe nemumwe anofamba nenzira yake kushambadza rwendo..
Rongedza zvinangwa, zviwanikwa, uye nguva dzinowanikwa kukambani yako uye kutsvaga vashambadzi vakamboshanda mumaindasitiri akafanana kana nemakambani akapokana zvakafanana. Iwe unogona kushamisika kuti chinhu chakakosha pane ako ekushambadzira kuyedza kungave kusiri kukoshesa musangano unotevera, kutengesa bhuku rinotevera, kana kutungamira munhau dzezvemagariro.
Nenzira… semunyori, mutauri, uye mushambadzi… Ini handisi kuzvisarudzira kubva pachinyorwa chino. Ini ndinogona kunge ndisiri akakodzera kukambani yako, chero!
Tags: Authorskutsvaga wekushambadziranzira yekuwana mushambadzimabhuku ekushambadzirakushambadza rwendokutaurakuvimbakunyora
3 Matipi evashambadzi Kuchengetedza yavo Yemagariro Media Mapasipoti
Simbisa Yako Yemagariro Midhiya Sarudzo Kupokana neiyi 8-Pfungwa Yekutarisa